Ndine urombo Careerbuilder! iFilm inotakura Super Bowl Commercials | Martech Zone
Muvhuro, Kukadzi 5, 2007 Muvhuro, Kukadzi 5, 2007 Douglas Karr
Zvakanaka, ndakave nekusave nehanya neni kwepepanhau-muridzi weCareerbuilder regai zvakanakisa kwandiri. Dai ndakaita imwezve yekunyepedzera, ndingadai ndakaona kuti iFilm yaive nekodzero yekugovera mafirimu. YouTube haina kudaro. Saka - hezvinoiwo, angu anodiwa kushambadzira e2007 Super Bowl:
Ndine urombo Careerbuilder! (Kunyangwe ini ndichiri kufunga kuti iwe unofanirwa kuve nekuzara uye kwemahara kugovaniswa kwako kushambadza kuburikidza chero epamhepo vhidhiyo pasocial network nharaunda)
Kuti utarise ese Super Bowl Ads a2007, hezvino iwe enda: